कांग्रेस फकाएर कम्युनिस्ट मिलाउन सफल होलान प्रचण्ड ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
२१ आश्विन २०७८, बिहिबार १० : ११ बिहान
आफ्नो पुरानै पार्टी व्युँताएर अहिले नेपाली कांग्रेससहितका दलको गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको छ । राजनीतिमा चतुर राजनितिज्ञका रुपमा चिनिने प्रचण्डले बेलाबेला अप्रत्याशित निर्णय र सम्झौता गरेर आम नागरिकलाई चकित पार्ने गर्छन । तर, अहिले उनी बदलिँदो राजनीतिको घनचक्करमा सबैभन्दा कठिन मोडमा आइपुगेका छन् ।
राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछिका प्राय सबै राजनीतिक घटनाक्रममा प्रचण्ड केन्द्र बिन्दुमा छन् । सशस्त्र द्वन्‍द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने, ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल, माओवादी पार्टी विभाजन, नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकता गरि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको निमार्ण हुँदै नेकपा विभाजनसम्म उनी नै केन्द्र बिन्दुमा रहे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यसपछि प्रचण्डकै भाषामा केपी ओलीले गरेको ‘प्रतिगमन परास्त’ भएको छ । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले ओलीले संसद् विघटन गर्नुलाई प्रतिगमन भनेर संज्ञा दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पनि कदमलाई असंवैधानिक करार गरेको छ । कांग्रेससहित, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृतको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकार बनाउन प्रचण्ड सफल देखिएका छन् ।
नजिकै आइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचनको सामना कसरी गर्ने भन्‍ने प्रश्‍न प्रचण्डका लागि थप पेचिलो र चुनौतीपूर्ण छ । प्रचण्डलाई जनयुद्धका धेरै सारथीहरुले क्रमशः छोड्दै गए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरु प्रचण्ड संसदीय भासमा डुबेको भन्दै अलग भए ।
एमालेसँगको एकता अघि पुन माओवादी केन्द्रमै फर्किएका रामबहादुर थापा बादलले समेत अहिलेको बदलिएको राजनीतिमा प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । बादल मात्रै होइनन् जनयुद्धका अर्का एक कमान्डर टोपबहादुर रायमाझी, सुदूरपश्चिमका अर्का प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट एमालेमै बसेका छन् ।
प्रचण्डले सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण मात्रै गराएनन्, माओवादीलाई जनमतको हिसाबले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टीसमेत बनाए । त्यसयता प्रचण्ड सत्ता र शक्तिको निर्णायक भूमिकामा छन् । तर, सदैव निर्णायक र शक्ति केन्द्रमा रहेका प्रचण्ड नेकपा विघटनपछि पूर्ववत अवस्थामा रहन्छन त ?
एमालेसँग पार्टी एकीककरण गरेर तीन वर्षमा फेरि तोडे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ।
दुई–दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकै ठाउँ उभिएका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपालविरुद्ध कार्यकर्तालाई उचालिरहेका छन्। यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमले आसन्‍न चुनावमा कसरी शक्तिशाली हुने भन्‍ने विषयले प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।
जनवर्गीय संगठनका भेला, प्रशिक्षणमा प्रचण्डले चरम निराशा र आक्रोश मिसिएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रचण्डले प्रायः अब आउने चुनावसम्म नै वर्तमान सत्ता साझेदार गठबन्धन अघि बढ्ने बताउने गरेका छन् । जबकी कांग्रेस नेताहरुले सबै कम्युनिस्टविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्‍ने बताइरहेका छन्।
कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि यो गठबन्धनको मुख्य निर्णायक शक्ति प्रचण्ड हुन् । अन्य बेलाजस्तो घुर्की लगाउने हैसियत यतिखेर प्रचण्डसँग छैन। ओली सरकार अपदस्त गर्नका लागि कांग्रेस विना सम्भव थिएन। त्यसैले अहिले कांग्रेस माओवादीका लागि अपरिहार्य बनेको छ। प्रचण्डले प्राय अब आउने चुनावसम्म नै वर्तमान सत्ता साझेदार (कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी) गठबन्धन अघि बढ्ने बताउने गरेका छन्। जबकी कांग्रेस नेताहरुले सबै कम्युनिस्टविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्‍ने बताइरहेका छन्।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। तर, पछि विचार र सिद्धान्तसमेत मेल नखाएको भन्दै प्रचण्डले नै सहमति तोडेर एमालेसँग चुनावी एकता गरेका थिए। विगतको यही उदाहरण पेस गर्दै कांग्रेसले सत्तागठबन्धनकै दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा देखिँदैन। कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भएको बेला कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा छ।
एमाले विभाजन, माओवादी शक्तिमा क्षयीकरण, जनता समाजवादी पार्टी विभाजन जस्ता घटनाबाट प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ। तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने केपी ओलीलाई परास्त गर्नका लागि भए पनि कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
एमालेसँगको एकता गर्नुको एउटा भित्रि रहस्य प्रचण्ड शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुने लालसा पनि हो भनेर टिप्पणी गर्छन्। राजनीतिक सिद्धान्त र बोली व्यवहारमासमेत विपरीत धुव्रमा भएका ओलीसँग पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डले फेरि पनि कुनै चमात्कारिक निर्णय गर्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।
नेकपामा ओलीसँगको विवादमा सँगै उभिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितको समूहसँग माओवादी वैचारिक हिसाबले निकट छन्।